Fanadihadiana lalina momba ny Xiaomi Mi4c | Androidsis
Xiaomi Mi4c, ny famerenana amin'ny teny Espaniôla
Anio izahay dia manana haja hampahafantatra anao ity terminal Xiaomi vaovao ity, ny Xiaomi Mi4c de navoaka vao iray volana lasa izay ary ankehitriny iray amin'ireo fahatsapana tamin'ity taona 2015 ity. Terminal iray izay mikendry ny hisian'ny fifaninanana mazava nampiditra Nexus 5X vao tsy ela akory izay, na dia misy aza ny fahasamihafana lehibe izay hahafahantsika mahazo azy io amin'ny antsasaky ny vidin'ny terminal Google.
Este Xiaomi Mi4c, azontsika atao amin'ny endriny roa samy hafa, dia ny iray kinova fototra misy tahiry anatiny 16 GB sy RAM 2 GB kely kokoa noho 200 Eurosary iray kinova vitamina misy tahiry anatiny 32 GB sy RAM 3 GB fa ny 235 Euros. ny terminal dia tonga miaraka amin'ny processeur Six-core Snapdragon 808 amin'ny hafainganam-pandehan'ny famantaranandro 1,8Ghz ary ny sasany manaitra fakan-tsary nataon'i Samsung ary maka sary sy horonan-tsary izy ireo amin'ny haavo misy ny antsoina hoe terminal avo lenta. Raha te hahalala bebe kokoa momba ny pitsony teknika an'ity Xiaomi Mi4c manaitra sy ny zavatra tsapako manokana ity ianao, dia manoro hevitra anao aho mba tsy ho diso ny famerenana an-dahatsary an-dahatsoratra tafiditra ao amin'ny lohatenin'ity lahatsoratra ity, ary tohizo ihany ny famakiana ity lahatsoratra ity.
Famaritana ara-teknika an'ny Xiaomi Mi4c
Operating System Android 5.1.1 miaraka amin'ny sosona Miui V7
efijery IPS 5 "miaraka amin'ny FullHD (1920 × 1080) 480 dpi vahaolana ary Corning Gorilla Glass3 fiarovana
processeur Qualcomm Snapdragon 808 Hexacore amin'ny 1 Ghz
Tahiry anatiny 16 Gb / 32 Gb raha tsy misy ny fanitarana amin'ny alàlan'ny MicroSD
Fakan-tsary aoriana 13 mpx novokarin'i Samsung miaraka amin'ny FlashLED roa sy ny vavahady 2.0 mifantoka
Fakan-tsary aloha 5 mpx nataon'i Samsung ihany koa
Conectividad DualSIM - 2G: GSM 850/900/1800 / 1900MHz 3G: WCDMA 850/900/1900 / 2100MHz 4G: FDD-LTE 1800/2100 / 2600MHz - Bluetooth 4.1 - Wifi - GPS sy aGPS miaraka amin'ny teknolojia Glonass
Fitaovana hafa Paompy indroa raha hifoha - Sensors Edge - Fiasa iray tanana
bateria Polymer lithium 3000 mAh
lanja Gramin'ny 126
vidiny 205 Euros ho an'ny maodely 16 Gb sy 2 Gb RAM y 235 euro amin'ny tahiry anatiny 32 Gb ary RAM 3 Gb
1 Ny tsara indrindra amin'ny Xiaomi Mi4
2 Ny ratsy indrindra amin'ny Xiaomi Mi4c
3 Hevitra avy amin'ny editor:
Ny tsara indrindra amin'ny Xiaomi Mi4
Famolavolana malama sy matevina
Modely RAM 2 sy 3 Gb
16 sy 32 Gb modely fitehirizana anatiny
Loko maro hisafidianana
Processeur Snapdragon 808 mampihetsi-po
Long bateria fiainana
Ny tsara indrindra amin'ny Xiaomi Mi4c, Manala ny vidiny ambany isika, azontsika atao ny mahita azy amin'ny endriny kely sy maivana izay namboarina manokana ho an'ireo mpampiasa rehetra izay mitady terminal refesina kokoa amin'ny refy ary tsy mila kitapom-batsy hitondra azy na aiza na aiza.
Raha ny lafiny tsara amin'ny terminal dia be dia be ny fahatsapana fa nanolotra ny mombamomba azy manokana izy ireo ka hamintiniko azy ireo ho lisitra:
Fijerena 5 ″ FullHD IPS efijery miaraka amin'ny loko mamirapiratra sy mazava.
Volavola matevina sy kanto misy amin'ny loko isan-karazany.
Processeur Snapdragon 808 mampihetsi-po izay manolotra fampisehoana mahatalanjona miaraka amin'ny fanjifana bateria tena feno.
Spectacular sosona ny fanaingoana MIUI V7 miankina amin'ny Android 5.1.1 Lollipop ary super configurable.
Mety ho fakao ity, apetraho ny TWRP Recovery ary mametraka Romana Xiaomi Eoropeana voalohany miaraka amin'ny fanavaozana isan-kerinandro ny rehetra mivantana avy amin'ny fitaovana mihitsy fa tsy mila PC. Zahao ity tutorial Mega azo ampiharina feno ity izay nataoko andro vitsivitsy lasa izay.
Fampisehoana manokana toa ny paompy indroa mba hifohazana na ireo sensor vaovao.
Fakan-tsary avo lenta avo lenta novokarin'i Samsung.
Feo mahery sy mazava avy amin'ny mpandahateny aoriana mba tsy hahadino antso na fampandrenesana na dia amin'ny tontolo be tabataba aza.
Batterie 3000 mAh lehibe izay manolotra fahaleovan-tena eo amin'ny efijery maharitra 6 ora eo ho eo.
Tariby USB TypeC sy fampandehanana haingana, ao anatin'ny 30 minitra fotsiny ny famahana ny bateria dia mameno hatramin'ny 75% ny fahafahany.
Fanavaozana Xiaomi, Isam-bolana ho an'ny Rom tsy miovaova (Tsy misy faka) ary isan-kerinandro ho an'ny roms fampandrosoana (ROOT)
Ny ratsy indrindra amin'ny Xiaomi Mi4c
Tena malama aoriana
Tsy manohana MicroSD
Na dia miatrika terminal aza izahay izay hanome betsaka horesahina amin'ny ambin'ny taona 2015 ary azo antoka izany hanana fanekena sy fahombiazana amin'ny varotra, Izahay koa dia miatrika terminal iray izay misy lafiny sasany izay tsy tena tianay, indrindra ny fonony ao aoriana sy ireo fitaovana plastika misy poloney tena tsara izay mamorona azy malama, malama dia malama.
Etsy ankilany, ny tsy manana slot ho an'ny fanitarana fahatsiarovana anatiny amin'ny alàlan'ny karatra MicroSD, na ny fampidirana a bateria tsy azo esorinaMino izahay fa izy ireo dia ho teboka manan-danja roa izay hampiverina ny mpanjifa mety hiverina.
€205 a €235
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Xiaomi » Xiaomi Mi4c, ny famerenana amin'ny teny Espaniôla
Adrian_8 dia hoy izy:
Araka ny hitanao dia tena fototra ny famerenana.
Mampiasa ny telefaona isan'andro aho ary manamarina fa amin'izao fotoana izao dia tsy misy efijery 6 ora.
Mampahafantatra anao ihany koa aho fa ny fakantsary dia mety ho avy amin'ny Samsung na Sony.
Mba hamoahana lahatsoratra an'ity karazana ity dia mila mampahafantatra bebe kokoa ny tenanao ianao
Valio amin'i Adrian_8
Taiza no nahitanao fa 235 ny dikanteny voalohany?
amin'ny fikarohana gearbest alohan'ny hitsikerana ny asshole: /
amin'ny gearbest 😀
jereo alohan'ny hitsikerana ny asshole xd
Nividy iray aho ary nanandrana nanova ny teny sinoa ho amin'ny Espaniôla ary nokasihiko izany ary maty izy io, afaka misy olona manampy ahy ve
Ny fomba tsara indrindra hizarana karazana rakitra amin'ny terminal Android, na mifandray amin'ny tamba-jotra mitovy izy na tsia